သဘာဝကျကျဖြူဝင်းတဲ့အသားရေကို ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမယ် | CosmeticMyanmar
Home » Article » သဘာဝကျကျဖြူဝင်းတဲ့အသားရေကို ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမယ်
အသားဖြူတယ် ဝင်းတယ်ဆိုတာက မိန်းကလေးတွေအားလုံးလိုချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဟိုကောင်မလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်း အသားလေးကဖြူဖွေးနေတာပဲ အားကျလိုက်တာ ဆိုပြီး ပြောဖူးကြမှာပေါ့နော်။ အခုမင်မင်ရေးထားတာကိုဖတ်ပြီးရင် အဲ့လိုပြောတဲ့စကားတွေကို လုံးဝပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အချစ်တို့အသားအရေလေးကို ကြည်ကြည်ဝင်းဝင်းလေးဖြစ်သွားမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြောပြပေးမှာမို့လို့ပါ။
အသားဖြူတယ်တို့ ဝင်းတယ်ဆိုတာတို့ကတော့ နဂိုဖြူတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ သိပ်မသိသာတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အသားညိုသူလေးတွေ, အသားရေမကြည်တဲ့သူလေးတွေအတွက်တော့တကယ့်ကို ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ အသားဖြူဆေးထိုးမှာပေါ့လို့ပြောတဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့။ အဲ့ဆေးက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတော့ဘူးလား? တကယ်ထိုးမယ်ဆိုရင်ရော သတ္တိရှိမှာလား ပြီးတော့ အဲ့လိုမျိုးတွေကို အားမပေးပါဘူး။ ထိုးလိုက်တဲ့အသားရေကလည်း သဘာဝကျကျဖြူနေတာမဟုတ်ပဲ ဖြူဆွတ်ဆွတ်ကြီးဖြစ်နေတာပါ။ ဒီတော့ သဘာဝကျကျ အသားကြည်အောင် ဖြူအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
အသားဖြူလိမ်းဆေးတွေ lotion တွေ ဘယ်လောက်လိမ်းနေပါစေ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်နေရင်အသားရေကစိုလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းကနေ ပြုပြင်ပေးမှ ပိုပြီး ထိရောက်ပြီး လျင်မြန်မှာပါ။ တစ်နေ့ကိုရေအနည်းဆုံး ၂ လီတာသောက်ပါ။ မသော်က်ချင်ရင်တောင် အသားရေလေးလှသွားတော့မှာဆိုပြီးတော့ တွေးပြီးသောက်ပါ။
ကိုယ့်အသားရေနဲ့လိုက်ဖက်ပြီး အလွယ်တကူရှာဝယ်လို့ရတဲ့ lotion မျိုးကိုရွေးပါ။ ကိုယ်နဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုန်သွားရင်ထပ်မှာဖို့ ထပ်ဝယ်ဖို့အချိန်တော်တော်ပေးရတဲ့ ဟာတွေဆိုအဆင်မပြေပါဘူးနော်။ Lotion ကို ရေချိုးပြီးခါစအချိန်မှာလိမ်းရင်ပိုထိရောက်ပါတယ်။ ရေချိုးပြီးခါစမှာ ကိုယ့်အသားရေရဲ့ရေဓါတ်ကို မဆုံးရှုံးစေတော့ဘူးပေါ့။ Lotion ရွေးချယ်ရာမှာလည်း စိတ်ချရပြီးတော့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့အမျိုးအစားကိုသာရွေးချယ်ပေးပါ။
ဒါကတော့ ကြားဖူးကြတယ် လုပ်ဖို့သာပျင်းနေကြတာလေ။ သိနေတယ် လှချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပျင်းလို့ဘယ်ရမလဲနော်။ အချိန်တစ်ခုလောက်သေချာလေးပုံမှန်လုပ်ပေးမှ သိသာတဲ့ရလာဒ်ကိုရမှာပေါ့နော်။ Scrub လုပ်တာ တစ်နည်းအားဖြင့် ကြေးချွတ်တာက တစ်ပါတ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခါလောက်တော့ပုံမှန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အသားရေမှာဆဲလ်သေတွေက scrub မလုပ်ပေးရင် ညိုညစ်ညစ်ကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကြည်လင်သင့်သလောက်မကြည်လင်ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် သေချာလေး ကြေးချွတ်ပေးပြီးတော့ lotion လေးပြန်လိမ်းပေးထားလိုက်ပါ။
နေရောင်ဆိုတာကတော့ အသားရေကို ဆိုးဝါးစွာပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အပြင် အရေပြားပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နေရောင်ကြောင့်အသားရေကို ပုံမှန်ထက် ပိုပြီး ရင့်ရော်စေတာကြောင့် နေရောင်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပေးတာကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။ ပြီးတော့ မတတ်နိုင်လို့ ထွက်ရမယ်ဆိုရင်တောင် အကာအကွယ်လေးတွေကိုဆောင်ထားပါ။ ဥပမာ-ထီး, ဉီးထုပ်, နေရောင်ကာခရင်မ်ကို လိမ်းပြီးမှအပြင်ထွက်ပါ။
Tags: body skinWhitening